डाक्टर सा'ब, आमा कुर्न छोरीले पनि सक्छे
घर पुगेर मैले आमा र बालाई भने, 'म जन्मेको दिन हजूरहरू निराश हुनुभयो होला है।’
आमाको रिपोर्ट आएपछि डाक्टरहरूले छलफल गरेर आमालाई टिचिङ अस्पातको 'रेड जोन’मा सारे।
‘आमाको अवस्था के छ सर?' भनेर मैले सोध्दा डाक्टरले 'तेत्ति आत्तिनु पर्दैन, ठीक हुन्छ' भन्ने उत्तर दिए। आमालाई करीब १२ घण्टा सम्म ‘अब्जर्भेसन’मा राखियो, कुनै उपचार सुरूनै भएन।
'डाक्टरसा'ब हेर्नु न आमाको अवस्था झनै बिग्रिदै गयो।’
डाक्टर मसँग झडङ्ग रिसाउँदै 'रेड जोन' भनेको थाहा छैन तपाईंलाई?
'बिरामी अन्तिम अवस्थामा छ, खोइ तपाईंको अलि सिनिअर मान्छे कोही छैन? तुरुन्त आइसियू खोजेर लैजान भन्नुस्,' उनले भने, ‘तपाईको दिउँसो आउनु भएका दाइलाई हामीले भनेका थियौं।’
मैले डाक्टरलाई सोधेँ, 'मलाई दिउँसो नै किन यो कुरा नभनेको? यो रातको १२ बजे म कहाँ गएर आइसियू खोजौं?’
डाक्टरले सोधे 'तपाई हो बिरामीको मान्छे ?’
'हो सर ।’
मैले भने, 'डाक्टरसा'ब, यो बिरामीको सिनिअर, जुनिअर जे भनेनी मै हो। यहाँ बिरामी राख्ने वा नराख्ने निर्णय र पैसा तिर्ने सबै मैले गर्ने हो। मलाई नै सबै कुरा भन्नुहोस्।’
त्यसपछि डाक्टरले हाँसेर 'हुन्छ' भने ।
आमा घरिघरि मेरो जेठा दाइलाई बोलाउनु हुन्थ्यो। 'म नै हो तपाईंले बोलाएको जेठो छोरो’ भन्दै आमाको नजिक पुग्थें। आमा मेरो हात सुम्सुमाउनु हुन्थ्यो, घरको काम सोध्नु हुन्थ्यो । आमाको बेड नजिक मस्तिष्कघातको उपचार गराइरहेकी अर्की बिरामीका कुरुवा थिए, छोरीज्वाई।
आमाले निरन्तर छोरा खोजेको देखेर ती छिमेकीहरूले भने, 'ए आमा, कति छोरालाई बोलाउनु हुन्छ, छोरीले यत्रो सेवा गरिराकी छिन् त। छोरै किन चाहियो?’
दुर्गम पहाडमा हुर्किनु भएकी मेरी आमाका के कुरा? भर्खरै काठमाडौंका पढेलेखेका डाक्टरले त म ‘छोरी'लाई पत्याएका थिएनन्। म छोरी भएकै कारणले त हो टिचिङका डाक्टरले मलाई पूरा सूचना दिएनन् र मैले झण्डै आमालाई गुमाएकी!
छिमेकीबीच विवाद भयो भने छोरा हुने व्यक्तिले झगडाको अन्तिममा 'मेरो छोरा आउँछ र तलाईं देखाइदिन्छ' भन्छन् । छोरी मात्र हुनेले चाहिँ, 'मेरा छोरीमात्र छन् भनेर हेपेको तैंले' भनेर आक्रोश पोख्छन्।
प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन ९, २०७४, ०३:१४:५५